Somaliya Oo kamid Noqotay Dalalka Bixin-waayay Qaaraanka Xubinnimada QM AwdalMedia Awdalmedia Somaliya Oo kamid Noqotay Dalalka Bixin-waayay Qaaraanka Xubinnimada QM
Somaliya Oo kamid Noqotay Dalalka Bixin-waayay Qaaraanka Xubinnimada QM
Qaramada Midoobay ayaa soo saartay liiska dalalka aan weli bixin lacagaha qaaraanka ah ee Miisaaniyadda golaha guud Qaramada Midoobay, waxaana dalalka la soo saaray kujira dalka Soomaaliya.
Qoraal kasoo baxay Qaramada Midoobay ayaa waxaa lagu sheegay in dalalka aan bixin lacagaha qaaraanka ah ay weeynayaan xubinimada Qaramada Midoobay hadii aysan jirin duruuf gaar ah oo heeysata, maadaama aysan bixin lacagta deynta ah oo dhan 14 milyan, sida lagu soo bandhigay shaxda wadamada aan bixin oo ay Soomaaliya ku jirto.
“Xubin ka tirsan Qaramada Midoobay oo lagu leeyahay dayn bixinta tabarucaadkeeda maaliyadeed ee Ururka wax cod ah kuma yeelan karo Golaha Guud haddii inta ay le’eg tahay ama ka badan tahay qaddarka qaaraanka ee ka soo baxaylabada hore oo buuxa, “ayaa lagu yiri qoraalka Qaraamada Midoobay.
Sidoo kale warbixinta ayaa intaasi kusii dareysa wuxuu u ogolaan karaa xubintaasi inuu codeeyo haddii uu ku qanco in bixin la’aanta inay sabab u tahay shuruudo ka baxsan xakamaynta xubinta.
Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Farmaajo ayaa habeeno kahor khudbad uu jeediyay waxaa uu ku sheegay in dowladda Soomaaliya fagaarayaasha Caalamka meel wanaagsan ka gaartay balse saacado kadib uu soo baxay Qoraalka Qaramada Midoobay.
Soomaaliya ayaa bishii June ee sanadkii 2020-kii loo doortay inay ka mid noqoto 21-ka Madaxweyne ku xigeen ee fadhigga 75-aad ee golaha guud ee Qaramada Midoobay, jagadaas oo ay Soomaaliya ugu dambeysay sanadka marka uu ahaa 1979-kii.
Jubbaland Oo Heshiis la Galay Shirkad Gaar loo Leeyahay